(tonga teto avy amin'ny Mpaminany (sokajy ao amin'ny Baiboly hebreo))
Ny Nevi'im na Nebi'im ("mpaminany") dia ilazàna ireo boky izay mamorona ny fizaràna faharoa ao amin’ny Baiboly hebreo (atao hoe Tanakh) manomboka eo amin’ny Bokin’i Josoa ka miafara amin’ny Bokin’i Malakia. Ny fizaràna atao hoe Torah no eo alohany fa ny fizaràna atao hoe Ketuvim koasa no ao aoriany. Tsy afangaro amin'ny lazain'ny Kristiana hoe "bokin'ny mpaminany" ny "Mpaminany" na "Nevi'im" ao amin'ny Baiboly hebreo.
2 Fizaràn’ny Nevi’im
2.1 Ny Nevi’im rishonim na Mpaminany taloha
2.2 Ny Nevi'im aharonim na Mpaminany taoriana.
Ny hoe nevi’im dia teny hebreo (נְבִיאִים‬ / Nəḇî'îm) izay midika hoe “mpaminany (maro)”. Ny endrika milaza tokan’io teny io dia nabî (“mpaminany (tokana)”). Araka ny lovantsofina dia mpaminany no nanoratra an’ireo boky isan’ny atao hoe Nebi’im ireo.
Mizara roa indray ny Nevi’im dia ny Nevi'im rishonim (נביאים ראשונים / "mpaminany taloha") sy ny Nevi'im aharonim (נביאים אחרונים / "mpaminany farany" na "mpaminany taoriana"). Ny “mpaminany taloha” dia ilazàna ireo boky nosoratana talohan’ny Fahababoan’ny Zanak’iIsraely tany Babilona fa ny “mpaminany taoriana” kosa dia enti-manondro ireo boky voasoratra taorian’izany fahababoana izany. Ny Bokin’i Daniela dia tsy voasokajy ao amin’ny Nevi’im na isain'ny Kristiana ao amin'ireo atao hoe " bokin'ny mpaminany".
Ny Nevi’im rishonim na Mpaminany talohaModifier
Ny Nevi’im rishonim dia ireo boky sokajîn’ny Kristiana ho boky ara-tantara. Misy boky efatra ny ao amin'ny Nevi'im rishonim dia ireto avy:
Sefer Yehoshua (ספר יהושע‎ ) na Yehoshua : Josoa
Sefer Shoftim (ספר שופטים) na Shoftim : Mpitsara
Sefer Shemuel (ספר שמואל) na Shemuel : Samoela voalohany sy Samoela faharoa
Sefer Melakhim (ספר מלכים) na Melakhim : Mpanjaka voalohany sy Mpanjaka faharoa
Marihina fa tsy misaraka ho boky roa ireo Bokin’ny Mpajaka ao amin’ny Baiboly hebreo, torak'izany koa ny Bokin'i Samoela.
Ny Nevi'im aharonim na Mpaminany taoriana.Modifier
Ny bokin'ny mpaminany sisa rehetra dia ao amin'ny vondrona atao hoe Nevi'im aharonim. Ny Kristiana dia manasokajy azy ireo ao amin’ny atao hoe bokin’ny mpaminany, nefa tsy ny bokin'ny mpaminany rehetra no isan'ny Nevi'im aharonim, ohatra amin'izany ny Bokin'i Daniela izay voasokajy ao amin'ny Ketuvim ("soratra"). Miisa efatra ny boki’ireo mpaminany taoriana, dia ireto avy:
Sefer Yeshayahu (ספר ישעיהו) na Yeshayahu : Isaia
Sefer Yrmeyahu (ספר יִרְמְיָהוּ) na Yrmeyahu : Jeremia
Sefer Yehezkael (ספר יחזקאל) na Yehezkael : Ezekiela
Trei Assar (תרי עשר “mpaminany madinika roa ambin’ny folo”)
Ireo mpaminany taoriana telo voalohany dia atao hoe “mpaminany lehibe”. Ny Trei Assar dia manambatra ireo mpaminany miisa roa ambin’ny folo atao hoe "mpaminany madinika" – dia ireto avy: Sefer Hoshea (ספר הושע) (Hosea), Sefer Yo'el (ספר יואל) (Joela), Sefer Amos (ספר עמוס) (Amosa), Sefer Ovadiyah (ספר עובדיה) (Obadia), Sefer Yohnah (ספר יונה) (Jona), Sefer Mikhah (ספר מיכה) (Mika), Sefer Nahum (ספר נחום) (Nahoma), Sefer 'Havakuk (ספר חבקוק) (Habakoka), Sefer Tsefaniyah (ספר צפניה) (Zefania), Sefer Haggai (ספר חגי) (Hagay), Sefer Zekhariyah (ספר זכריה) (Zakaria) ary Sefer Malakhi (ספר מלאכי) (Malakia).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Nevi%27im&oldid=975142"
Dernière modification le 30 Septambra 2019, à 18:53
Voaova farany tamin'ny 30 Septambra 2019 amin'ny 18:53 ity pejy ity.